George Orwell. Makore 115. Kurangarira Big Brother naNapoleon | Zvazvino Zvinyorwa
George Orwell. Makore 115. Kurangarira Big Brother naNapoleon
Akazvarwa pazuva rakaita nhasi makore 115 apfuura, akazviita mukati Motihari, yeBritish koloni ye India, uye pasi pezita re Eric Arthur Blair. Gare gare aizove munyori ane mukurumbira uye mutori venhau watinoziva nhasi pasi pseudonym ya George Orwell. Uye aive munyori wemamwe emabhuku anozivikanwa uye ane simba kwazvo muzana ramakore rechiXNUMX, senge 1984 o Kumukira papurazi. Ndinoyeuka chimiro chake nesarudzo yake zvirevo uye zvidimbu.
2 Snippets uye zvirevo
4 Kumukira papurazi
Pakati pezvimwe zvinhu uye kusarudzika muhupenyu hwake, Orwell aive mune iyo Indian Imperial Mapurisa nekuti akange asina mari yekuenda kuyunivhesiti. Akagara mukati Paris y London, achidzidzisa semudzidzisi wechikoro uye achishanda semubatsiri wechitoro chemabhuku Hampstead Heath, muLondon. Asi akazopedzisira ave mutori wenhau, achitora chikamu muhondo yevagari veSpain, akashandira iyo Kumabvazuva Service of the BBC uye aive munyori wenhau uye munyori wenyaya yemagazini wechuru.
Mabasa ake anonyanya kuzivikanwa, uye ayo achiri kushanda nanhasi, zviri pachena iwo ataurwa pamusoro 1984 y Kumukira papurazi, kuongorora kwakajeka uye kushoropodza nguva dzakararama dzaakararama, uko hutongi hwehudzvanyiriri nehutongi hwakazara. Asi kune mamwezve mazita akadai Hapana chena muParis neLondon o Mazuva eBurma.
Hakuzovi nekuvimbika; hakuzove nekuvimbika kwakawanda kudarika izvo zvine chikwereti kuParty, uye hakusisina rudo kupfuura rudo rweBig Brother. Pachave pasina kuseka kunze kwekuseka kwekukunda kana muvengi akundwa. Pachave pasina hunyanzvi, pasina zvinyorwa, kana sainzi. Hakuchazovizve nemusiyano pakati pekunaka nehuipi. Mafaro ese achaparadzwa. Asi nguva dzose, usakanganwa, Winston, pachave paine ruchiva rwesimba, iyo nyota yekutonga, iyo inogara ichiwedzera uye ichiwedzera uye kuwedzera kungwara. Pachagara paine mufaro wekukunda, kunzwa kwekutsika pamusoro pemuvengi asina dziviriro. Kana iwe uchida kuwana zano rekuti ramangwana richange rakaita sei. pikisa bhutsu ichipwanya kumeso kwemunhu ... zvisingaperi.
Isu, Winston, tinodzora hupenyu pamatanho ese. Iwe unofungidzira kuti pane chimwe chinhu chinonzi hunhu hwevanhu, icho chinozotsamwiswa nezvatinoita uye kutipandukira. Asi usakanganwa kuti tinogadzira hunhu hwevanhu. Varume vanoumbika zvisingaperi. Kana kuti zvimwe wadzokera kune yako yekare pfungwa yekuti va proletarians kana varanda vachatimukira kuzotirwisa. Sunga zano iro. Ivo havana dziviriro, semhuka. Hunhu ndiye Mutambo. Dzimwe dzacho dziri kunze, hadzikoshi.
- Big Brother ariko here? akadaro Winston.
-Chokwadi chiripo. Bato riripo. Big Brother ndiye akafanana nebato iri, ”O'Brien akadaro.
-Izvo zviriko mupfungwa imwechete yekuti ini ndiripo?
Kana mutungamiri akataura nezvechiitiko chakadai izvi hazvina kuitika, hazvina kuitika. Kana ichiti vaviri uye vaviri vashanu, saka vaviri neaviri vashanu. Iyi tarisiro inondinetsa zvakanyanya kupfuura mabhomba.
Udzvanyiriri hauna kumisikidzwa kuchengetedza chimurenga; chimurenga chinoitwa kumisikidza hudzvanyiriri.
Kana vachigona kundiita kuti ndimire kukuda ... chingave chokwadi kutengesa.
Bope racho rakakurumidza kupera. Nguruve ina dzakamirira, dzichidedera uye nemhosva dzakanyorwa mune yega yega zviso zvavo. Napoleon akarayira kuti vareurure mhosva dzavo. Vakanga vari ivo vana nguruve vaive varatidzira apo Napoleon akabvisa musangano weSvondo. Pasina kumwezve kudiwa, vakareurura kuti vanga vachitaurirana muchivande naSnowball kubva paakadzingwa, vakamubatsira mukuparadza chigayo, uye vakabvuma kupa "Animal Farm" kuna Mr. Frederick. Vakawedzera kuti Snowball akabvuma muchivande kuti anga ari mumiriri wechivande kuna VaJones kwemakore mazhinji. Pavakapedza kureurura, imbwa, pasina kutambisa nguva, dzakabvarura huro uye panguva iyi Napoleon, nezwi raityisa, akabvunza kana imwe mhuka iine chekureurura.
Ngatione, shamwari: Ndeupi chokwadi cheupenyu hwedu uhu? Ngatizvitarisei izvi: hupenyu hwedu hunosiririsa, hunonetsa uye hupfupi. Isu takazvarwa, ivo vanotipa isu nechikafu chatinoda kuti tizviriritire, uye avo vedu vanokwanisa kutimanikidza kuti tidaro kune atomu rekupedzisira resimba redu; uye panguva iyo yatisingachaiti basa, vanotiuraya noutsinye hunotyisa. Hakuna mhuka kuEngland inoziva zvinoreva mufaro kana husimbe mushure mekuve negore rimwe chete. Iko hakuna mhuka yemahara muEngland. Hupenyu hwemhuka hunongova kusuwa nehuranda; Ichi ndicho chokwadi.
Hondo ihondo. Munhu akanaka ega ndiye akafa.
Mhuka dzese dzakafanana, asi dzimwe dzakaenzana kupfuura dzimwe.
Mhuka dzinoshamisika dzakatarisa maziso avo kubva kunguruve kuenda kumunhu, uye kubva kumunhu kuenda kunguruve; uye zvakare kubva kunguruve kuenda kumunhu; asi zvaive zvisingaite kusiyanisa kuti ndiani aive mumwe uye ndiani aive mumwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » George Orwell. Makore 115. Kurangarira Big Brother naNapoleon
Mutongi weRivas. Chiyeuchidzo cherufu rwemunyori waDon Álvaro kana simba remhedzisiro